Torohevitra Mahasambatra ny Fianakaviana: Manàna Hazondamosina
Hoatran’ny hazo mahatanty rivo-doza ianao raha manana hazondamosina
Tsy ny anaranao na ny paozinao fotsiny no mampiavaka anao, fa ny fitsipika arahinao sy ny zavatra inoanao ary ny toetranao koa. Manana hazondamosina ianao, raha manana ny maha izy anao fa tsy mora miovaova hevitra.
Hahavita hijoro amin’ny hevitrao ianao raha manana hazondamosina, fa tsy hanaraka an’izay tenenin’ny namanao fotsiny.
“Be dia be ny olona manaraka am-bokony an’izay asain’ny hafa ataony. Hoatran’ny saribakoly e! Ny olona no mifidy ny akanjo anaovany fa tsy izy.”—Adrien.
“Tsy manaiky hotaomin’ny ankizy haditra aho, na dia sarotra aza izany indraindray. Hitako hoe namana tsara ny ankizy iray, raha tsy matahotahotra aho miaraka aminy satria fantatro hoe tsy hanery an’ahy hanao ratsy izy.”—Cathy.
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Aza manaiky intsony hovolavolain’ity tontolo ity, fa miovà ka havaozy ny sainareo.”—Romanina 12:2.
Fantaro hoe inona ny zavatra hainao sy ny toetra tsaranao, inona ny toetra ratsinao, ary inona ny zavatra inoanao. Ho hitanao amin’izay hoe olona hoatran’ny ahoana ianao izao, ary te ho lasa hoatran’ny ahoana.
Ny zavatra haiko sy ny toetra tsarako: Inona avy ny talentako? Inona avy ny toetra tsarako? (Ohatra hoe: Marim-potoana ve aho? Mahafehy tena ve? Tia miasa ve? Malala-tanana ve?) Inona avy ny zavatra tsara efa ataoko?
SOSO-KEVITRA: Anontanio ny dadanao na ny mamanao na izay namana atokisanao, raha tsy hainao hoe inona ny toetra tsaranao na ny zavatra hainao.
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Aoka ... ny tsirairay samy handinika izay ataony avy. Amin’izay dia hanana antom-pifaliana ny amin’ny tenany ihany izy, fa tsy amin’ny fampitahany ny tenany amin’ny hafa.”—Galatianina 6:4.
Ny toetra ratsiko: Inona avy ny toetra tokony hialako? Rehefa inona aho no tena alaim-panahy hanao ratsy? Amin’inona aho no mila mifehy tena kokoa?
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Raha hoy isika: ‘Tsy manana ota isika’, dia mamita-tena.”—1 Jaona 1:8.
Ny zavatra inoako: Inona ny zavatra heveriko hoe mety na tsy mety, ary nahoana? Mino an’Andriamanitra ve aho? Nahoana aho no miaiky hoe tena misy izy? Inona no hitako hoe tsy rariny ataon’ny olona, ary nahoana? Inona no inoako fa hitranga amin’ny hoavy?
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Hiambina anao ny fahaiza-misaina, ary hiaro anao ny fahaiza-manavaka.”—Ohabolana 2:11.
Fantaro ny zavatra inoanao, ny fitsipika arahinao, ny toetra tsaranao sy ny toetra ratsinao, ary ny tanjonao. Hahay hanapa-kevitra tsara ianao amin’izay rehefa misy ankizy mitarika haditra.